IMedallia: Phucula amava abaThengi beB2B | Martech Zone
IMedallia: Phucula amava abaThengi beB2B
NgoLwesithathu, Novemba 13, 2013 NgoLwesithathu, Novemba 13, 2013 Douglas Karr
Ukuqonda kunye nokulandelela umgangatho wamava akho abaxumi ngokubanzi kuya kusiba nzima kuba abathengi bakho bachukumisa iindawo ezininzi ezahlukeneyo zombutho wakho. Xa abathengisi besebenzisa isikhokelo kunye nokunxibelelana nesoftware, ezi zixhobo zithunyelweyo azibizi nje kuphela kwaye azisebenzi, kodwa zinokwenza ukuba kube nzima ukubanombono opheleleyo wabathengi kunye namava abo kwinkampani yakho.
Amaqela entengiso anokuyiqonda ngakumbi imiba yabathengi xa enokubona umbono omanyeneyo wazo zonke iintlobo zempendulo, edibanisa ukoneliseka ngokubanzi / ulwalamano umbono wovavanyo ngolwaneliseko lwendawo nganye yokuhlangana edibanisa amava abathengi.
IiMedallia umnikelo omtsha we-B2B uyakwenza oku. Ukubonelela ngokungaphezulu kokujonga nje amava abathengi bakho. Ufumana umzobo opheleleyo, umbono opheleleyo wamava abo bonke abathathi-nxaxheba bakho abaxhamlayo. Uncedo lwale mbono? Iqaqambisa amathuba okuphucula amakhulu asemacaleni kwindalo, amathuba ophuculo, ngelixa kucacile kubathengi bakho, anokutyibilika phakathi kweentanda ngaphakathi kweefilimu zeB2B.
Isisombululo esivela eMedallia iqokelela ingxelo kuyo yonke indawo yokuthinta umthengi iwebhusayithi, indawo, inkxaso, ukuthengisa ngokuthe ngqo, kunye nokusebenzisana kwamaqabane-kwaye ke ubhalise ingxelo leyo kwinkqubo emanyeneyo enika inkampani yakho umbono ohambelana kuwo onke amasebe. Ayivumeli nje amasebe akho ukuba abone inxenye yeshishini abajongene nayo; yenza ukuba amaqela eakhawunti yakho aqonde ingxelo kwinqanaba leakhawunti kwaye ivumele abaphathi bakho ukuba baqonde wonke umfanekiso wamava abathengi bakho.
tags: b2b ubukrelekrele kumthengib2b ukwaneliseka kwabathengiinyani
I-Playnomics: I-Mobile App yokuFumana ixabiso kwiPredictor (AVP)